Soso-kevitra teny malagasy: ankihy na an-kihy
2021-06-04 @ 21:46 in Kolontsaina
Andao atao hoe ankihy valo ny eight digits na huit caracteres
Ao anatin'ny iray volan'ny teny malagasy isika amin'izao fotoana izao. Tsy famoronana fa fanitsiana na fanavaozana araka izay mahamety anareo.
Ny hihy dia ilay faritra na nofo mafy-malemy mihazona ny nify. Ao aminy no milentika ny fakan'ny nify ary tsy tokony hisy nify hitsiry ivelan'ny hihy.
Etsy ankilany indray, indraindray isika rehefa manisa amin'ny teny malagasy dia manao hoe ankiray na anakiray na anankiray, anankiroa na anakiroa na ankiroa sns. Tsy tena mpandalina aho fa ny mety ho mahatonga izany dia na avy amin'ny teny malay aostroneziana hoe anak [zanaka] na izay apetrako eto hoe ankihy iray sy ankihy roa sns.
Raha tokony ho adika ny teny frantsay hoe "onglet" dia ahitantsika ny teny hoe "ongle" midika hoe hoho amin'ny tanana na/sy amin'ny tongotra. Hijery isika hoe mifankaiza ny hoho sy ny hihy? Ny aiza no mety kokoa amin'ny sehatra mbola lazaintsika hoe nomerika?
Ny numerique indray no nandikan'ny frantsay ny digital niainga avy amin'ny voambolana hoe digit izay mbola mety miainga amin'ny rantsam-batana (doigt) raha jereko maimaika fotsiny amin'izao. Raha folo ny rantsan-tanana dia sampona ny mihoatra na latsak'izay. Raha 32 kosa ny isan'ny nify dia tsy sampona raha latsak'izay ny nify mirafitra eo... fa mihamitombo tsikelikely ny isan'ny nify mitsiry amin'ny olombelona.
Tsy fantatro aloha na ampy izay fanazavana izay na azonareo ny tiako lazaina fa manentana ny rehetra aho hampiasa ny teny hoe ankihy 120 raha te-hanonona ny hoe 120 caracteres na 120 digits. Manentana ny rehetra koa miaraka amin'izany hametraka teny mifanandrify amin'ny hoe "digital" ho miankihy; ohatra fankatsary nomerika hatao hoe fankatsary miankihy, fitaovana nomerika na dizitaly ho fitaovana miankihy. Fehiny, fanafinaretana ry zareo ilay mankamamy teny malagasy a!